Xildhibaano Haween ah oo katirsan Baarlamaanka Kenya oo lagu heesto lacago badan !! | Dhexnimo Media
Home Wararka Xildhibaano Haween ah oo katirsan Baarlamaanka Kenya oo lagu heesto lacago badan...
Xildhibaano Haween ah oo katirsan Baarlamaanka Kenya oo lagu heesto lacago badan !!
Qaar kamid ah Xildhibaanada haweenka ah ee ku jira Baarlamaanka dalka Kenya ayaa lagu heestaa lacago badan oo loo siiyay sahay safar ay ku aadi lahaayeen dalka Mareykanka balse markii dambe la baajiyay safarkaasi.
Xildhibaanadan lacagta lagu heesto oo gaaraya 15-haween ah ayaa midkiiba la siiyay lacag gaareysa 18-kun oo Dollar si ay sahay uga dhigtaan shir ay uga qeyb gali lahaayeen dalka Mareykanka balse markii dambe loo baajiyay cabsi laga qabo cudurka Caronavirus.
Afhayeenka baarlamaanka Kenya, Justin Muturi, ayaa dhawaan amar ku bixiyay in xildhibaannada ay soo celiyaan lacagta sahaysa safarka loo siiyay, waxa uuna sheegay Afhayeenka in xildhibaanadan aysan wali soo celin lacagta ay qaateen.
“Xildhibaannada laga rabay inay ka qeybgalaan shirkaasi baaqday waxaa looga baahan yahay inay si buuxda usoo celiyaan kharashaadka loo sii hormariyay,” ayuu yiri Afhayeenka Baarlamanaka Kenya.
Xildhibaanadan lacagaha la siiyay aanan soo celin ayaa loogu tala galay in sahay ahaan u isticmaalaan 7-da bishan ilaa 22-ka bishan oo la filayay in ay ku maqnaadaan dalka Mareykanka ay shir uga qeyb gali lahaayeen balse markii dambe la baajiyay.
Qaar kamid ah Xildhibaanadan lacagta la siiyay ayaa sheegay in ay isticmaaleen lacagtaasi loo sii hor mariyay, waxa ayna xuseen in ay ka fekeraaan sidii ay lacagtaasi u raadin lahaayeen dib ugu celin lahaayeen waaxda Maaliyada ee Baarlamaanka.
Warbaahinta dalka Kenya ayaa ku warantay in Xildhibaanada Kenya safarada dibadda loo siiyo lacago aad u badan, waxaana Xildhibaanada safarada shaqo u aadan Mareykanka iyo Yurub maalintii la siiyaa lacag dhan 1,200 oo dollar.
Previous articleWasiirka Arrimaha Dibadda Oo Beeniyay Warka Sheegaya In Dawladda Itoobiya Joojisay Saamigii 19% Ee Ay Ku Lahayd Dekedda Berbera
Next articleIlhan Cumar oo la aqal gashay nin lagu xaman jiray in uu xiriir kala dhaxeeyo !!